Veigela - fitaterana sy fitsaboana eny an-kalamanjana
Ny fananganana toeram-ponenana ho an'ny trano fonenana tsy mahazatra sy mahavariana dia mamolavola veygel - ao am-jaridaina dia ho lasa fanaka tena izy. Ity hazo mamony matsiro ity , izay mahafinaritra ny voninkazo be dia be indroa amin'ny vanim-potoana - amin'ny lohataona sy ny fararano amin'ny fararano dia mora ampy hikarakarana raha nambolena araka ny tokony ho izy.
Famerenana ny kirihitra
Ny fananganana takelaka iray dia tsy maintsy ilaina ny mamboly fitaovana. Ny tsara indrindra dia vokatry ny fambolena, mamela ny fakan'ny tifitra maitso, satria haingana kokoa amin'ny fitomboany izany. Saingy ny tifitra tsy azo avela, izay tsy dia niasa loatra nandritra ny taona maromaro vao mangiran-tany ary mety hijanona mihitsy aza amin'ny fitondran-tena ratsy.
Ankoatra ny fampielezana, ny fampielezana ny vava dia azo atao amin'ny fomba voa. Noho izany, tsy ilaina ny manangona voa. Avelao izy ireo hiondrika amin'ny fahalavoana, ary amin'ny lohataona dia hisy jiro tanora izay afaka manidina ao anaty fitahirizana samihafa. Raha ny marina, io fomba io dia tsy manome antoka fa hitazona ny lokon'ny reny ireo zavamaniry vaovao.
Ny lozam-pamokarana maitso amin'ny 10-15 santimetre no voajato amin'ny lohataona (Martsa-Aprily), ka mamela ravina roa ao amin'ny sampana. Rehefa avy nikaroka ny ranomaso tamin'ny fanatsarana ny fitomboan'ny rantsankazo, dia tokony hatsipy ao anaty toerana maizin'ny 12 ora ny tapa-kazo, avy eo dia mametraka tariby mirefy 0,5 cm eo ho eo. Aorian'izany, ny tranon-koditra amin'ny tapa-damba dia rakotra fonosana polyethylene, na manapaka tsotra izao ny tavoahangy mandrapahatongany ny fananganana drafitra vaovao.
Amin'io fomba fampielezana ny kirihitra io dia miseho ao anatin'ny iray volana ny fakany. Saingy tsy midika izany fa ny orinasa dia vonona ny hivezivezy eny amin'ny tany malalaka. Mba hahazoana tanjaka dia ilaina ny manome azy farafahakeliny iray taona sy tapany, ary aorian'izany dia handefa azy ireo any amin'ny zaridaina. Ataovy izany amin'ny fiandohan'ny lohataona, satria ny taham-pahavelon'ireo tanora mpamboly namboly tamin'ny fararano dia tena ambany, raha ampitahaina amin'ny fambolena lohataona.
Mba hambolena zavamaniry matanjaka ao an-jaridaina, dia ilaina ny manamboatra lavaka miaraka amin'ny sisin'ny 40 santimetatra ary tsy latsaky ny 30 santimetatra ny haavony, mba hamenoana fasika matevina eo ambany, ary avy eo dia tsara ny mamboly amin'ny organika. Rehefa tapaka ny fakany, manangom-pitandremana sy mampidina ny tany mba hisorohana ny fanatsarana ny fahabangana. Ny hevi-dehibe dia heverina fa rehefa voan'ny vozona dia eo amin'ny ambaratonga miaraka amin'ny tany. Aorian'ny fambolena dia tokony ho feno rano ny kirihitra.
Ahoana no hikarakarana ny kirihitra?
Rehefa vita tsara ny fandehanana tany amin'ny tany malalaka, dia mila fikarakarana tsy tapaka ny vava, ary avy eo dia hitombo haingana ny zavamaniry. Ity fikarakarana ity dia ahitana rano fisotro madio, famafana, ary fialofana amin'ny ririnina mba hiarovana amin'ny fanala. Ataovy izany amin'ny fanampian'ny spunbond na lapnika.
Ny singa iray hafa momba ny fikarakarana ny Veygel dia hanongana ny ririnina. Natao araka izay nilaina izany mba hanesorana ireo rantsana malemy sy malazo, ary hamporisihana ny fitomboan'ny tifitra aoriana sy ny fananganana satroboninahitra tsara tarehy.
Ahoana no ahafahana manangona raozy?
Inona ireo zavamaniry antsoina hoe tsimparifary?
Ardysia: fikarakarana tokantrano
Ahoana no hikomiana voatabia?
Ny fitsaboana ny goavana amin'ny lohataona amin'ny aretina sy ny bibikely - ny fomba tsara indrindra
Molodilo - fambolena sy fiahiana
Ahoana no mampitombo ny hazan-dranomasina?
Mahonia papular - famoahana amin'ny famongorana
Ahoana no itehirizana azy?
Tranoben'ny tanimboly vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly
Fambolena tongolo lay - fitsipika tsotra amin'ny fijinjana goavana
Fanitsiana ny lohataona amin'ny paoma sy ny aretina
Aquadetrim ho an'ny zaza vao teraka
Karôpia salady misy tongolo lay
Ahoana ny famafazana urine amin'ny fitondrana vohoka?
Ahoana no handraisana lobio amin'ny voan-kazo?
Mitovy amin'ny volonao amin'ny tananao
Mofomamy haingana ao anaty lafaoro - ireo sakafo mahasalama sy haingana indrindra ho an'ny fofona namboarina
Lozam-pifamoivoizana akaikin'ny saka
Ahoana ny fomba hiverenanao fifandraisana amin'ny olon-tianao?
Mihamaro ny prolactine amin'ny vehivavy
Bodyflex ao an-trano
Ny alika lehibe indrindra
Ny fahadisoana mahazatra indrindra amin'ny famolavolana visa Schengen
Inona no asehon'ny faratampon'ny sambon-danitra sy ny tendany?
Fanitarana ny habaka subarachnoid amin'ny zaza
Tsy sakafo karbôbina
Mihabetsaka amin'ny tanany
Inona no azonao ihinanana amin'ny 6 volana?